Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Obimin အိုဗီမင် အားဆေး
Obimin အိုဗီမင် အားဆေး
ခဏခဏမေးပါတယ်။ Obimin Film Coated Tablets ဆိုပြီးလာတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေက မေးတာများတယ်။ ဆေးအညွှန်းမှာ မမွေးမီနဲ့ မွေးပြီး တနေ့ ၁ လုံးသောက်ပါလို့ဆိုတယ်။
- Vitamin A ဗီတာမင် အေ = 3000 IU
- Vitamin D ဗီတာမင် ဒီ = 400 IU
- Vitamin B1 ဗီတာမင် ဘီ ၁ = 10 mg
- Vitamin B2 ဗီတာမင် ဘီ ၂ = 2.5 mg
- Vitamin B6 ဗီတာမင် ဘီ ၆ = 15 mg
- Vitamin B12 ဗီတာမင် ဘီ ၁၂ =4mcg
- Folic Acid ဖေါလစ်အက်စစ် = 1,000 mcg
- Calcium Panthothenate ကယ်လ်စီယမ် ပင်တိုသီနိတ် = 7.5 mg
- Nicotinamide နီကိုတင်နမိုက် = 20 mg
- Vitamin C ဗီတာမင် စီ = 100 mg
- Iodine (Potassium iodide) အိုင်အိုဒင်း = 100 mcg
- Calcium Lactate ကယ်လ်စီယမ် လက်တိတ် = 250 mg
- Copper (Cupric Sulphate) ကြေားနီဓါတ် = 100 mcg
- Iron (Ferrous Sulfate) သံဓါတ် = 30 mg
Ferrous Sulfate ဖဲရပ်စ် ဆာလ်ဖိတ် သံဓါတ်ဟာ CDC သတ်မှတ်ချက်အရ
• ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ဖဲရပ်စ် ဆာလ်ဖိတ် သံဓါတ် 30 mg သောက်ရမယ်။
• ကလေးနို့တိုက်ချိန်မှာ 15 mg သောက်ရမ်ယ်။
• ယောက်ျားတွေက 10 mg နဲ့ အမျိုးသမီးတွေက 15 mg သောက်ရမယ်။
• သွေးဆုံးပြီး အမျိုးသမီးတွေက 10 mg လိုပါတယ်။
အဲလို အားဆေးအမျိုးမျိုးကို ဆေးတမျိုးထဲပေါင်းစပ်ထားတာကိုသုံးရင် သတိထားရမှာက လိုအပ်ချက်ဆိုတာ တယောက်နဲ့ တယောက်က မတူကြပါ။ တချို့က ပိုလိုမယ်။ တချို့အဲလောက်မလိုပါ။
1. Calcium blood test (ကယ်လ်စီယမ်) စစ်ဆေးခြင်း http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2013/02/calcium-blood-test.html
2. Ferrovit ဖါရိုဗစ် http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2014/04/ferrovit.html
3. Folic acid ဖေါလစ်-အက်စစ် http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/11/folic-acid.html
4. Iodine ပင်လယ်နဲ့မနီး လည်ပင်းကြီး http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/01/iodine.html
5. Iron supplement and Liver diseases သံဓါတ်နဲ့ အသဲရောဂါ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/11/iron-supplement-and-liver-diseases.html
6. Iron supplements သံဓါတ်အားဆေး http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2013/01/iron-supplements.html
7. Vitamin B complex ဗီတာမင် (ဘီ) အုပ်စု http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/11/vitamin-b-complex.html
8. Vitamin B12 and Iron supplement ဘီ-၁၂ နှင့် သံဓါတ်လိုအပ်ချက် http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2014/03/vitamin-b12-and-iron-supplement.html
9. Vitamin D ဗီတာမင် (ဒီ) http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2009/08/vitamin-d.html
10. Vitamin D ဗီတာမင် (ဒီ) မေးခွန်း http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2014/03/vitamin-d.html
11. Vitamin E ဗီတာမင် (အီး) http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2013/08/vitamin-e.html
12. Vitamin K ဗီတာမင် (ကေ) http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/11/vitamin-k.html